Banky SG Madagasikara-Zandary: ady amin’ny famotsiam-bola | NewsMada
Banky SG Madagasikara-Zandary: ady amin’ny famotsiam-bola
Par Taratra sur 11/07/2019
Vita, omaly, 10 jolay, nanomboka ny 8 jolay, tetsy amin’ny Toby Ratsimandrava, ny fiofanana nomen’ny banky Société générale Madagasikara (na SG Madagasikara) ireo zandary miisa 30, mikasika ny ady amin’ny famotsiam-bola, ny heloka amin’ny lafiny vola sy ny toekarena. Tanjona ny ahalalan’ny zandary bebe kokoa ny tontolon’ny banky, ny vokatra sy ny tolotra ao aminy, ary indrindra ny lalàna mifehy ireo sehatra ireo.
Andiany fahadimy amin’ny zandarimaria ity nahazo fiofanana ity ary nanomboka tamin’ny taona 2015 fiaraha-miasany amin’ny SG Madagasikara. Zandary mpanao fanadihadiana avokoa ireo niofana ireo ary zava-dehibe ity fiofanana ity satria tena ilain’izy ireo amin’ny asany.
Tanjon’ny SG Madagasikara amin’izao fiaraha-miasa amin’ny zandarimaria izao ny hanajana ny lalàna sy ny fepetra mifehy ny asan’ny banky sy ny ara-bola, ary indrindra ny hanamafisana ny fifehezan’ny zandary ny asany amin’ireo sehatra ireo. Eo koa ny hanomezana antoka ny mpanjifa sy ny mpiara-miombon’antoka samihafa ny asa ataon’ity banky ity. Zava-dehibe, araka izany, ny fifampizarana traikefa amin’ny sehatra hafa, toy ny zandarimaria, ohatra, sy ny mpiara-miasa amin’ny SG Madagasikara samihafa. Mandray ny fanamarihana sy ny torohevitry ny rehetra rahateo ity banky ity, araka ny fanambaran’ny tompon’andraikitra ao aminy.